Miyaad igugula talin kartaa meelihii wanaagsanaa si aan u kala saaro astaanta PR ee dhabarka dhabarka?
Dabcan, helitaanka xiriirka maamulka sare iyo ilaha xooggan ee PageRank sida wargeysyada qaranka ama xitaa hay'adaha warbaahinta caalamiga ah waa inaan waligood la dayin. Waa hab weyn oo lagu naqshadeeyo bogga internetka ama blog-ka PR ee dhabarka dambe ee dhabarka, laakiin hawshu waxaa loo yaqaana sida dhabta ah ee waqti-qaadashada iyo xoogga shaqada. Si kastaba ha noqotee, wax yar oo ka mid ah hal-abuurka maskaxda, waxaad si quruxsan u qabsan kartaa qaar ka mid ah dib-u-qabadka dheeraadka ah si loo hagaajiyo marxalad aad u sareeya ee PR-ga ee dhabarka. Maxaa badanaa - laga yaabo inaad horay u heshay qaybo ka mid ah waxyaabaha tayada leh ama xiriiro hore oo loo baahnaa oo loo baahan yahay taas. Hoosta waxaan ku socdaa inaan kuu muujiyo laba meelood oo wanaagsan iyo isugeyn qiimeyn ah oo la tixgelinayo in lala xiriiro. Dhammaanteed, taasi waxay noqon doontaa fursad weyn oo lagu xiro iyada oo laga yaabo in ay yihiin kuwa ugu kalsoonida badan iyo kuwa waxtarka leh ee waxbarashadda / xukuumadaha dawladda. Hase ahaatee, labada dhinacba uma baahna qarash miisaaniyadeed oo badan ama waqti aad u badan. Dabcan, haddii loo hoggaansamo xaq. Meelaha Dawlada Hoose
Ka mid ah kuwa kale, bogagga maxalliga ah iyo kuwa qaran ahaanba ama shabakadaha taageerada ah ee la kordhiyo gawrka domain ee GOV waa dhab ahaan ilaha tirada yar ee ugu dambeyntii DH sareeya (heerka maamulka domain) oo garaacaya dhibcaha 100 dhibcood oo buuxa. Iyadoo tixgelinaysa in qofku uu ku guuleysan karo inuu horumariyo astaanta PR ee dhabarka dhabarka oo uu la socdo kan ka soo jeeda dowladaha ugu muhiimsan, waxaa jira fursado qaar weli laga heli karo heer degaan. Waxaan ula jeedaa in badan oo ka mid ah boggaga internetka ee dawlada ah ayaa isticmaalaya wicitaano ganacsi si kor loogu qaado kobcinta internetka ee shirkadaha gobolka ee ku yaal aaggooda. Hagayaasha dawladaha hoose ayaa laga yaabaa inay noqdaan habka ugu sahlan uguna dhaqsaha badan ee qabashada qaar xoogaa xooggan oo xooggan oo tilmaamaya boggaaga ama bloggaaga.
Waxbarasho (Jaamacad / Kulliyad) Bogag
Qeybta libaaxa ee hay'adaha waxbarashada ee la aaminsan yahay ayaa la ogyahay inay leeyihiin boggooda internetka ee ku saabsan 90-95 dhibcood daraasadda dhowaan la sameeyay). Laakiin waxa ugu adag waa in la helo macnaha saxda ah ee wacyigelinta. Ugu horreyntii, isku day inaad sameyso raalligelin - inaad hesho dadka saxda ah ee aad taqaan sida arday hore ama xubno shaqaale. Iyadoo la tixgelinayo in jaamacadaha iyo kulliyadaha ay marwalba doonayaan inay muujiyaan, u adeegso faa'iidadaada - kaliya u soo bandhig sheekooyinka guulaha dhabta ah, wadooyinka waawayn ee xirfadaha, ama wareysiyada kulul ee ay doonayaan inay arkaan, isla mar ahaantaasna cusbooneysiiyaan astaanta PR ee dhabarka laba ka mid ah xiriirrada cusub ee la abuuray. Maxaa badanaa - ka faa'iideysta dib-u-celinta qiimaha leh ee jaamacadaha ama bogagga dugsiyada sare ee dugsiga sare, waxaad si toos ah u isticmaashaa fursad kale si aad ugala hadasho magacaaga ganacsigaaga ama aad hesho balaarin balaadhan oo ku dhex taal warshadaha iyo suuqa shirkadda.
Haddii aan waxba laga caawinin, halkan waa hab kale oo lagu beddeli karo xiriirka saxda ah ee jaamacadaha ama machadyada kale ee waxbarasho - taas oo run ahaantii ka shaqeysa inaad ku kasbato qaar ka mid ah kuwan xiriiriya qaali ah. Dhammaan waxaad u baahan tahay waa inaad haysato alaab ama adeeg ay ku xiran yihiin ardayda degaanka, ama xubnaha shaqaalaha. Just iskuday inaad bixiso, tusaale ahaan, lambarka sicirka jaban. Isla mar ahaantaana, taasi waxay noqon kartaa hab weyn oo loo soo saaro saamiyo badan, hogaamin, liis gareyn iyo warbaahinta bulshada - marka laga reebo ujeedooyinka muhiimka ah ee iibsashada. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, in ay ku guulaystaan ​​nidaamkan shirkad ama shirkad ganacsi ayaa loo baahan doonaa si loo siiyo wax la iibsan karo ama lagu dalban karo internetka Source .